सीमाञ्चलको चुनाव र सीमा क्षेत्रमा प्रभाव | प्रतीक दैनिक - Prateek Daily
घर स्वतन्त्र विचार सीमाञ्चलको चुनाव र सीमा क्षेत्रमा प्रभाव
सीमाञ्चलको चुनाव र सीमा क्षेत्रमा प्रभाव
आम चुनाव जहिले पनि धेरैको चासो र अपेक्षाको विषय हुन्छ। चुनावमा सहभागिताको योग्यता राख्ने व्यक्ति वा उमेर तथा अन्य कारणले मतदानमा समेत सहभागिता जनाउन नसक्ने व्यक्ति वा जहाँ चुनाव भइरहेको हुन्छ, त्यससँग जोडिएको त्यो क्षेत्र जहाँ चुनाव भइरहेको छैन, सबैमा चासो हुन्छ। छिमेकमा भइरहेको चुनावप्रति अति नै चासो हुन्छ, उत्सुकता हुन्छ। यस किसिमको चासो र उत्सुकताका अनेक आयाम हुन सक्छ कतिपय अवस्थामा मतलब नै नहुनुपर्ने वा चुनावभन्दा पहिले तथा चुनावपछि कुनै प्रभाव पर्दैन, तर पनि चासो भइरहन्छ। हो, चुनावप्रति यस किसिमको स्वाभाविक चासो प्रजातान्त्रिक देशका हरेक नागरिकलाई हुने गर्दछ।
समग्र नेपालीमा अमेरिकाको चुनावप्रति पनि चासो थियो। अमेरिकाको चुनावको परिणामले नेपालीलाई खासै प्रभाव पर्दैन, तर विभिन्न कारणले विश्वशक्ति राष्ट्र अमेरिकाको चुनावप्रति नेपालीको चासो निकै रहेको थियो। र, जब सीमा जोडिएको एउटा प्रान्तमा नै चुनाव भइरहेको छ भने सीमाका बासिन्दालाई चुनावबारे चासो हुनु स्वाभाविक नै हो। भारतको बिहार प्रान्तमा प्रान्तीय सरकार बनाउने आम निर्वाचन भइरहँदा बिहारसित सीमा जोडिएका जिल्लाका, मुख्यगरी दक्षिणी भागका नेपालीमा खास सरोकार देखिएको छ। सीमा क्षेत्रका बासिन्दा त कतिपय यस्ता छन् जो नेपालका नागरिक हुन् तर भारतबाट उसको रोजीरोटी चलेको छ। अहिले जहाँ निर्वाचन भइरहेको छ वा जो मतदानमा सहभागी हुन्छन्, उनीहरूसित प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेकोले स्वाभाविकरूपमा चुनावप्रति चासो बढाएको हो।
सीमा क्षेत्रका धेरै मानिसका आफन्त, नातागोता तथा हितमित्र वा अन्य किसिमले एक अर्कासित सम्पर्क तथा समन्वय हुन्छ। दुई देशका नागरिकजस्तो व्यवहार नभई कतिपय अवस्थामा दिनमा कैयौंपटक आउजाउ भइरहेको अवस्था हुन्छ। यसै पनि बेटीरोटीको सम्बन्ध छ भनेर परम्परादेखि नै भनिंदै आएको छ। सीमाका महिला वा पुरुष दिउँसो वा राति पनि आफन्तको घरमा पूजा, बिहे आदि हुँदा एकअर्काको घरमा पुगेर सहयोग गर्दछन्। अझ केही पर्दावर्दा एक अर्कालाई सबै किसिमको सहयोग गर्नेहरू सीमा वारिपारि फिंजिएका छन्। यस किसिमको विशेष अवस्थाले पनि छिमेकमा चुनाव भइरहेको सन्दर्भमा सीमाका बासिन्दामा स्वाभाविक चासो भएको हो।
अहिलेको अवस्था नै विशेष छ। सीमा बन्द छ। हुनत नेपालतिर वा भारततिर जुनसुकै तहको निर्वाचन होस्, सहमतिमैं चुनावको समयमा कम्तीमा तीन दिन सीमा बन्द गर्ने चलन छ। तर अहिले सीमा बन्दको विशेष कारण कोरोना कहर हो। नेपाल र भारतबीचगत चैतदेखि हालसम्म सीमा बन्द छ। यति लामो समयसम्म दुई देशको सीमानाका बन्द भएको वर्तमान पुस्ताले सम्भवतः पहिलोचोटि देख्दैछ। यद्यपि जनस्तरमा थोरबहुत आवतजावत भइरहेको सुनिन्छ। तर पनि कतिपयले सीमानाका बन्द भएको लामो समय बितिसकेकोले सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई केही समस्या परिरहेको गुनासोहरू भइरहेका छन्। केही सङ्घसंस्थाले त नेपाल भारत सिमानालाई पहिलेझैं सामान्य बनाउन माग पनि गरिरहेका छन्। के विश्वास लिएका छन् भने बिहारको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि दुई देशको सिमाना नियमित हुन्छ। चुनावको कारणले सीमा बन्द गरिएको नभए पनि यसै समयमा बिहारको निर्वाचन परेको कारणले सीमानाका खोल्ने समय केही थप लम्बिएको हो भन्ने अनुमान सीमा क्षेत्रका बासिन्दाबीच रहेको छ। अब निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सीमानाका सामान्य हुने र पहिलेजस्तो दुवैतिरका मानिसको जीवन सामान्य हुने अपेक्षा पनि रहेको छ।
बिहारको राजनीतिको सीमा क्षेत्रमा खासै प्रत्यक्ष प्रभाव परेको पाइँदैन। नेपालको सीमा क्षेत्रका कतिपय बासिन्दाका आफन्त वा नातागोता वा हितमित्रको बिहारकै चुनावमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष सरोकार रहने हुँदा तिनीहरूको समर्थकप्रति केही बढी चासो हुनु वा मनोवैज्ञानिक सहानुभूति हुनु स्वाभाविक हो। सामान खरीदबिक्रीको कारणले बढी आवतजावत हुने वा कुनै पनि माध्यमले चिनजान हुने व्यक्तिको सरोकारले पनि सीमा क्षेत्रका नेपालीमा त्यहाँको चुनावप्रति स्वाभाविक चासो वृद्धि भएको हो।
नेपालको प्रदेश २ को दक्षिणी सिमाना बिहारसित जोडिएको छ। दक्षिणी सिमाना जोडिएको सम्पूर्ण क्षेत्रमा चुनाव भइरहेको छ। यस प्रदेशको दक्षिणी भाग र सीमावर्ती बिहारको उत्तरी भागको भाषा, वेशभूषा, संस्कृति आदि सबै कुरामा समानता रहेको छ। निर्वाध आवागमनको अवस्था निरन्तर रहेकोले कतिपय अवस्थामा सीमाका नागरिकबीच फरक नागरिकको अनुभूति पनि रहेको पाइन्न। यद्यपि राष्ट्रियताको सवालमा नेपालीहरू अलि बढी चनाखो रहने गरेको देखिंदै आएको छ। सीमापारि चुनाव र यसको प्रचारप्रसार भइरहँदा त्यसको चर्चा यताका मानिसमा पनि भइरहेको छ। त्यहाँ प्रदेशमा कसको सरकार बन्दा फाइदा वा नोक्सान हुन्छ भन्ने कुरा चर्चामा कदापि आउँदैन। बिहारको चुनावले कस्तो परिणाम ल्याउँदै छ भन्ने विश्लेषण सीमा क्षेत्रका कतिपय चोक, चिया पसल तथा अन्य सामान्य जमघटहरूमा हुन थालेको छ। निर्वाचन सम्पन्न भएर सरकार बनेपछि पनि नयाँ सरकारको अबको बाटो कस्तो हुने भन्ने विषयमा समेत सीमा क्षेत्रमा छलफल भइरहने हुन्छ।
सिमाना र सम्बन्ध जोडिएको कारण चुनावको चर्चा र प्रचारप्रसार हुन थालेदेखि सीमा क्षेत्रका बासिन्दामा पनि चर्चा हुन थालेको हो। मुख्यगरी सीमा क्षेत्रमा कुन उम्मेदवारको चर्चा बढी छ, कुन उम्मेदवारको व्यक्तित्व कस्तो छ वा अझ सीमासँग जोडिएको उम्मेदवार पनि कोही छन् कि? त्यहाँ उम्मेदवार बनेका कसैको सीमा क्षेत्रमा कुनै नातागोता वा बढी आउजाउ छ कि ? बिहारमा पढेर आएका कोही सीमाका नेपाली बासिन्दा छन् र उनका कोही साथी नै उम्मेदवार बनेका छन् भने झन् चुनावमा उसको चासोले निजी महत्व पाइरहेको हुन्छ। अहिले सीमा क्षेत्रका केही मानिसमा यस प्रकारको विशेष चासो देखिएको छ। सीमा क्षेत्रका केही बुद्धिजीवीहरूले बिहारको चुनावलाई नजीकबाट हेरेको सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक पनि गरेका छन्। सीमा क्षेत्रका बुद्धिजीवीले बिहारको चुनावलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्ने गरेका छन्। यसैगरी सीमा क्षेत्रका नेपाली जो राजनीतिमा चासो राख्दछन् वा कुनै राजनैतिक दलका सदस्य वा कार्यकर्ता छन्, तिनको विश्लेषण फरक हुनु स्वाभाविक देखिन्छ। बिहारको राजनीतिको नेपालको सीमा क्षेत्रमा कुनै प्रभाव पर्र्दैन भनी पुनः स्मरण गरौं तर पनि राजनीति गर्नेले राजनैतिक तथा सामाजिक दुवै दृष्टिकोणले विश्लेषण गर्ने गरेका छन्।
सीमा क्षेत्रका नेपाली बासिन्दा पनि वर्तमान अवस्थामा विभाजित देखिएका छन्। बिहारमा अपेक्षित परिवर्तन आउन नसकेको र अपेक्षाकृत सकारात्मक परिवर्तन हुन सकेको भन्ने पक्षमा मुख्य बहस केन्द्रित छ। करीबकरीब बिहारमा पनि यही किसिमको मुद्दा चर्चामा छ। कोरोना कहरको समयमा बिहारमा अपेक्षित मतदान हुन नसकेको भनी निराशा पनि प्रकट गरेका छन्। चुनाव प्रचारको शैलीदेखि उम्मेदवारको बोलीको शैलीसम्मको विषयमा चासो राख्ने सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरू मतदानमा अपेक्षा गरेभन्दा कम सहभागिता भएकोमा पनि स्वाभाविक बहस गर्ने गर्दछन्। अबको एक हप्तापछि बिहारको चुनावको नतीजा सार्वजनिक भएपछि सीमा क्षेत्रमा एकचोटि फेरि नयाँ किसिमले बहस शुरू हुने नै छ।
कहिलेकाहीं सारमा केही फरक नपर्ने भए पनि रूपकै लागि बहस हुन्छ। बिहारमा चुनाव भनेको अर्कै देशको एउटा प्रान्तको चुनाव हो, नेपालीका लागि, तर सीमा क्षेत्रका मानिसको दैनिक व्यवहार बिहारसित जोडिएका सर्वसाधारणको चासो चुनावको नतीजा आउन लाग्दा उत्कर्षतिर जानु स्वाभाविक हुनेछ।
अघिल्लो लेखमा२०७७ कात्तिक १९ गते बुधवारको प्रतीक दैनिक
अर्को लेखमाभयविना श्रद्धा उब्जँदैन
राजनीतिक अस्थिरतासँगै सङ्कटकालको सन्त्रास
२०७७ फागुन १४ गते शुक्रवारको प्रतीक दैनिक
सामुदायिक विद्यालयमा दिवाखाजा कार्यक्रम चलेन
२५ लाख ३५ हजार रकमसहित दुईजना पक्राउ
आजको प्रतीक दैनिक177